Tinye Pinterest Pinit Button na WordPress | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 5, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest Ọ bụ nnọọ ihe na-ewu ewu na ewu ewu… nke mere na saịtị ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na-amalite ịda mba. Ekwenyere m na uru Pinterest bụ na ọ bụ ihe ngosi ọhụụ nke edobere nke ọma ịkekọrịta ozi. Ọ bụ ezie na saịtị ndị ọzọ nwere ndepụta na-agwụ ike, ihe ngosi nke Pinterest na-ewepụta dị mfe iji pịgharịa iji chọta ihe na - ejide gị mmasị.
N'iburu nke ahụ n'uche, saịtị nkekọrịta mmekọrịta bụ ndị na-eweta okporo ụzọ dị egwu, yabụ gịnị kpatara na ị gaghị eme ka ọ dị mfe ịkekọrịta ọdịnaya gị? Taa, anyị agbakwunyela Pinterest Pinit bọtịnụ na isiokwu WordPress anyị. Ọ dị ezigbo mfe ịme… na anyị webatara webata bọtịnụ thumbnail gosipụtara dị ka URL onyonyo ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta Onyonyo gosipụtara, koodu isiokwu a bụ ịgbakwunye bọtịnụ Pinit na isiokwu gị n'ime Loop:
&media=ID), 'thumbnail' ); echo $thumb['0']; ?>&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Ntụtụ ya
Ọ bụrụ na ịchọghị ịkọwapụta onyonyo ahụ, lee koodu ọzọ:
&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Ntụtụ ya
Ọzọkwa - dị njikere itinye ederede Pinterest na gị footer.php
Maka ozi ndị ọzọ na ịmepụta bọtịnụ Pinit ma ọ bụ iji lee anya na ngwa na ngwa ha ndị ọzọ, lee anya na Ihe kachasị amasị Pinterest peeji. Ndị folks na Buffer akọwakwala Etu ị ga - esi gbakwunye bọtịnụ pinterest na blọgụ gị ma hapụ ndị mmadụ ka ha tinye foto na eserese iji nsụgharị Digg Digg kachasị ọhụrụ.
Tags: pinitbọtịnụ pinitbọtịnụ pinterestWordPress
Feb 7, 2012 n’elekere 10:30 nke abali
Na-egbutu ọnụ. Enwere m ike ịbụ obere ok mana nke ahụ bụ bọtịnụ “Pin ya” nke mbụ m hụrụ.
Feb 7, 2012 n’elekere 11:20 nke abali
Nnụnụ izizi na-enweta okporo ụzọ!
Aha ya bụ Sumit Kumar
nvmnd m mere ya. Ọ naghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịnweghị “eserese ihe osise” edobere maka ọkwa gị.
@ twitter-129525014: na-adịbeghị anya, o kwesịghị inwe ihe ọ bụla jikọrọ ya na Foto a na-egosipụta, mana ọ chọrọ ụdị onyonyo na ibe ahụ.
Mee 21, 2012 na 10: 09 AM
NJ), 'tọmbneelụ'); nkuzi mgbamejije $ thumb ['0']; >>
Ekelere m gị ekele dum maka obere mkpuru a, nna m ukwu.
Hapụrụ m ka m dozie koodu ShareThis maka ojiji na wordpress (ShareThis dị mma mana ọ ga-achọ ọtụtụ tweaking tupu ọ bara uru).
Ọ bụrụ na onye ọ bụla emee nke a n'otu ọnọdụ m:
<oge span = 'st_pinterest_hcount' displayText = 'Pinterest' st_img = 'ID),' thumbnail '); nkuzi mgbamejije $ thumb ['0 ′]; ?> & nkọwa = '>
Tinye uzo ozo ozo ichoro dika st_title st_url st_blahblahblah
Echere m na okwu a anaghị adaba p
edit: goddammit ọ na-parsed, nke ahụ mara mma daft. Tụkwasị na ole na ole oghere na ibe n'ibe ka ọ na-egosiputa.
Mee 21, 2012 na 10: 18 AM
Hey n'ezie achọtara m, 1 nkeji mgbe e mesịrị, na ị nwere ike ime ya otu a:
(n'ime mkpado isi)
pinterest wee dọpụta onyogho a 'opengraph' malarkey. Kpoo!
Mee 21, 2012 na 10: 49 AM
@fkypie: disqus Nke ahụ dị mma na ha na-eji data Opengraph! Daalụ maka ịkekọrịta.
Mee 21, 2012 na 10: 51 AM
Karịa ekele. Ọ ga-abụrịrị na m jiri oge kachasị mma nke awa abụọ na-agbalị idozi nke a… yabụ enwere m olileanya na m nwere ike inyere onye ọzọ aka ịchekwa obere oge!
Uhm, enweghị ike ịnweta balloon counter. M soro ihe ngosi gị site na nzọụkwụ, ihe niile na-arụ ọrụ mana balloon counter. Echiche ọ bụla banyere otu esi edozi nke a?
@ twitter-61936398: disqus must ga-enwe count-layout = ”kwụ” maka tebụl ka ọ pụta n’aka nri. Ọ bụrụ n’inwere ihe ziri ezi ma nwekwa nhazi ahụ ziri ezi, ikekwe naanị ị ga-echere ka pinterest megharịa ọnụ ọgụgụ ahụ. Ekwetaghị m na ha gosipụtara ya mgbe efu.
Jun 4, 2012 na 3:01 AM
Hi Douglas, ị bụ onye ziri ezi !!! 🙂 Ọ bụrụ na ịnweghị ntụtụ ma yabụ counter dị na efu, ọ gaghị egosi n'akụkụ bọtịnụ “Pin ya”. M setịpụrụ a ule ntụtụ na-elele ya, na mgbe counter emelitere na- “1” ọ pụtara n'akụkụ ya button. Daalụ maka ndumodu gị! 🙂
Enwere ike a kọwaa atụmatụ a n'ụzọ ziri ezi na isiokwu ahụ.
Jun 4, 2012 na 7:41 AM
Ọfọn, na-atụ anya na ndị folks ga-ahụ okwu gị! 🙂
Jun 21, 2012 na 7:36 AM
Ahụm m nwere na pinterest
Ejirila m pinterest iji bulie ogo saịtị m na nsonaazụ ya dị mma, ọ ka mma site na peeji nke 6 ruo peeji nke 4 nke peeji 1 n'ime izu 3.
Achọpụtara m na onye na-ere ahịa aha ya bụ "pinterest", nke họọrọ nke mbụ mgbe ịchọrọ "pinterest" na Fiverr, mepụtara nsonaazụ kacha mma na weebụsaịtị m. Ndị na-ere ahịa na-atụnye saịtị m na mmadụ 75 dị iche iche, ejighị n'aka etu o si mee nke a, mana o meela ka ogo SERP m ka mma. Agbalịrị m ndị na-ere 5 ndị ​​ọzọ na-enye egwu pinterest na Fiverr mana ha enweghị ike melite ogo saịtị m. Amaghị m ihe kpatara ya.
Mgbe m jiri pinterest maka SEO nwa oge, achọpụtara m ụfọdụ uru ya:
- Google hụrụ akara mgbasa ozi mmekọrịta.
- A na-ewere pin ọ bụla dị ka njikọ 3 inbound.
- Njikọ na onyonyo sitere na pinterest bụ dofollow.
- Cheta na ping njikọ nke atụdo ka eweputara ya na Google.
Dec 15, 2015 na 9:41 PM
Dị ka blogger m na-eji pinterest iji bulie ogo saịtị m na nsonaazụ ya dị mma, ọ kawanye peeji m mma. Daalụ maka ozi a! 🙂